Buy HOUSE SALE IN MAYANGONE (ID-1172) (4,500Lks) in မရမ်းကုန်း on ipivi.com
1 Story house for sale in Mayangone Township. 1100 sqft , Grant land. Located walking distance to Kabaraye Pagoda in7minutes.
Asking Price - 4500 Lakhs (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားသို့ (၇)မိနစ်အတွင်း သွားရောက်နိုင်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသော ရောင်းရန် တစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် ၁၁၀၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဂရန်မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
ရောင်းရန်ဈေးနှုန်း - သိန်း ၄၅၀၀ (ညှိနှိုင်း)
ရောင်းရန် တစ်ထပ်အိမ် (ID-1172)
အမည်: HOUSE SALE IN MAYANGONE (ID-1172)